China Precision CNC machining zvikamu vagadziri uye vatengesi | Lingjun
Product Name: Kutakura mota
Product material: ndarira
Material properties: Iine simba rakakwirira uye rinopesana nekuora
Kushandiswa kwechigadzirwa Inoshandiswa muindasitiri yeinjini neyemugungwa, pamwe nezvikamu zvezvimiro zvinoda corrosion kuramba, senge giya, giya rehonye, ​​bushing, shaft, nezvimwe.
Kugona kwezuva nezuva: zviuru zvitatu
Maitiro nemazvo: Zvinoenderana nevatengi kudhirowa zvinodiwa kugadzirisa
Zita rechiratidzo: Tungamira bhiza
Huru chiyero chenhamba yekudzora muchina chishandiso ndiko kupfupikiswa kwedhijitari yekudzora muchina chishandiso. Icho chiri otomatiki muchina chishandiso chine chirongwa chekudzora system. Iyo yekudzora sisitimu inogona kuita zvine musoro kugadzirisa chirongwa nekodhi yekudzora kana mamwe mirairo yekufananidzira, kuitsanangura, kuiburitsa nenhamba dzekodhi, uye kuipinza mumudziyo wekudzora nhamba kuburikidza nemutakuri weruzivo. Mushure mekuverenga uye kugadzirisa, chigadziriso chenhamba chinotumira masaini akasiyana-siyana ekudzora chiito chemuchina wemuchina, uye otomatiki anogadzirisa zvikamu zvinoenderana nechimiro uye saizi inodiwa nekudhirowa.
Yakakura chiyero CNC muchina chishandiso imhando yekuchinjika otomatiki muchina chishandiso, chinogona kugadzirisa matambudziko akaomarara, chaiwo, madiki batch uye akasiyana mativi kugadzirisa. Inomiririra danho rekuvandudza remazuva ano muchina wekudzora tekinoroji uye yakajairika mechatronics chigadzirwa.
Kana CNC muchina chishandiso chikashanda, haidi vashandi kuti vashandise muchina chishandiso zvakananga, asi kudzora CNC muchina chishandiso uye kuunganidza chirongwa chekugadzirisa. Chikamu chekugadzirisa chirongwa, chinosanganisira hukama hwekufamba nzira yechishandiso uye workpiece, magadzirirwo paramita (yekudya chiyero, spindle kumhanya, nezvimwewo) uye yekubatsira kufamba. Chikamu chekugadzirisa chirongwa chinochengetwa mutakuri wepurogiramu ine imwe fomati uye kodhi, senge perforated bepa tepi, kaseti tepi, floppy disk, nezvimwe. ruzivo rwechirongwa runoiswa kuCNC unit kuburikidza neinopinza mudziyo weCNC muchina chishandiso.
Zvakapfuura: High precision zvikamu kugadzirisa
Zvinotevera: Precision milling muchina zvikamu kugadzirisa
Precision Cnc Kushandura Machining Zvikamu
Precision Stainless Cnc Machining Zvikamu
Precision Stainless Steel Cnc Machining Zvikamu
Stainless Simbi Cnc Machining Precision Zvikamu